दिनदिनै बढ्दै कोरोना संक्रमित, शुक्रबार कति थपिए ? « Salleri Khabar
दिनदिनै बढ्दै कोरोना संक्रमित, शुक्रबार कति थपिए ?
३० पुस, काठमाडाैँ । देशभर पछिल्लो २४ घण्टामा थप पाँच हजार ८७ जनामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ । पछिल्लो २४ घण्टामा २० हजार ५६० जनाको नमूना परीक्षण गरिएको थियो । तेह्र हजार ४७४ जनाले पिसिआर र सात हजार ८६ जनाको एन्टिजीन विधिबाट परीक्षण गरिएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ ।